UGoogle uzisa iPixel 3 kunye nePixel 3XL ukutya umhlaba kunye nokunye | I-Androidsis
IHabemus Google Pixel 3 kunye ne-3XL: iG enkulu iya kuyo yonke into noMncedisi kunye nokufota
UManuel Ramirez | | Iiselfowuni
Rhoqo sivile ngokubhengezwa kunye neGoogle Pixel 3 entsha. Kuseziveki, sinokuthi phantse iinyanga, ukuvuza akuyekanga ukuvela ukuze sikhuphukele kumanqanaba aphezulu aziwayo esiqhele ukubiza ihype. Ngapha koko, sasilindele uGoogle ukuba abenomothuko wokugqibela kwiminqwazi kwaye yiyo loo nto simangaliswe sonke.
Ezinye iGoogle Pixel 3 kunye ne3 XL ezifika ukuze abalandeli bakho banokufumana ifowuni entsha kaGoogle kwakhona Ezandleni zakho. Kodwa ngaphezulu kwayo yonke into ephethe eyona njongo inkulu i-G ezandleni zayo: izixhobo ezibonelela ngamava asekwe kwi-AI + Software + Hardware. Ngenxa yoko, uMncedisi kaGoogle yenye yeendawo ezisisiseko zokusizisela amava apho izixhobo zekhompyutha ziyinxalenye yenye trio.
1 UGoogle uyayenza kwakhona
2 Eyona ilungileyo: AI + isoftware + yezixhobo zekhompyutha
3 Ukucaciswa kobuchwephesha beGoogle Pixel 3 kunye 3 XL
4 Ngokubonakalayo nakwisikrini ethetha ngeGoogle Pixel 3 kunye 3 XL
5 Ezinye iinkcukacha kunye namaxabiso abo
UGoogle uyayenza kwakhona
Omkhulu uG akayeki ukusothusa kwaye sijongane nenye yeenkampani zetekhnoloji ethe yavela kakhulu kumaxesha akutshanje. Ukubheja kwesandi nokuba uneefowuni zakho zepremiyamu Balwa ubuso ngobuso nxamnye ne-Samsung kunye ne-Apple; Ngubani oza kuthi ngeli xesha xa egxeka kakhulu ukuba iGoogle Pixel yokuqala inexabiso eliphezulu kangaka.
Kodwa enkosi umfanekiso obalaseleyo, okungunyaka ozayo xa kuthelekiswa ne-premiums zezinye iimveliso, kunye nokusebenza okungagungqiyo xa kufikwa ekubeni ne-Android ekwimo yayo emsulwa, ifumene uGoogle ukuba akwazi ukuqhayisa ngePixel brand eqhubeka nokubhida ngamandla. Ngokuqinisekileyo xa bebeka ezantsi emaphethelweni amabi, baya kuba ziifowuni ngakumbi nangakumbi kunezo sinazo ngoku.
Eyona ilungileyo: AI + isoftware + yezixhobo zekhompyutha
Ngaphandle kokuba ne-Android Pie 9.0 esele ifumaneka kumzi-mveliso, ezi Pixels zimbini zintsha Banomfanekiso omkhulu kwakhona. Banokukwazi nokuhamba ukusuka kulungelelwaniso oluphindwe kabini kolona lukhulu basebenzise inzwa ye-12.2 MP, ngelixa kwikhamera engaphambili ihlala kwi-8MP ineelensi ezimbini ezenza into yazo kwiifoto zeqela; Sijonge phambili kwindlela iifoto eziza kujongeka ngayo nemowudi yePixel ebalaseleyo.
Nangona into ebalulekileyo kukuba ikhamera kaGoogle izakuthatha eyona nto iphambili kuGoogle namhlanje: Isoftware ye-AI + yesoftware. Inkqubo yekhamera ngumzekelo ocacileyo woku ukuba ube linyathelo elingaphezulu kolu khuphiswano.
Ukuqaqambisa ukujonga ebusuku nokuba akukho sidingo sokuthatha ifoto ngaphandle kweflash. Oko kukuthi, isoftware yekhompyuter iya kukukhathalela ukuthatha iifoto ezilula kakhulu ezikhanyayo. Idemo engezantsi nemifanekiso.
Ukucaciswa kobuchwephesha beGoogle Pixel 3 kunye 3 XL
Ibhanti Uphando Uphando
Umzekelo Pixel 3 I-Pixel 3 XL
Inkqubo yokusebenza I-Android 9.0 Pie I-Android 9.0 Pie
Isikrini 5.5 intshi-I-HD epheleleyo + ye-AMOLED 18: 9 6.3 "QHD + (2960 x 1440) P-OLED 18.5: 9
Inkqubo IQualcomm Snapdragon 845 IQualcomm Snapdragon 845
i-ram 4 GB 4 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi Ngama-64GB / 128GB Ngama-64GB / 128GB
Igumbi eliphambili 12.2 MP - f / 1.8 - 1.4um - OIS - IPixel Core - 4K / 30FPS 12.2 MP - f / 1.8 - 1.4um - OIS - IPixel Core - 4K / 30FPS
Ikhamera yangaphambili 8 + 8MP - f / 2.2 - 1.4um - 1080p ividiyo 8 + 8MP - f / 2.2 - 1.4um - 1080p ividiyo
Ibhetri I-2.915 mAh ngokutshaja ngaphandle kwamacingo 3.430 ngokutshaja ngaphandle kwamacingo
Ubukhulu 145.6 x 68.2 x 7.9mm 158 x 76.6 x 7.9mm
Ezinye iinkalo I-NFC-yokufunda ngasemva kweminwe yeminwe-iBluetooth 5.0-GPS-Uhlobo lwe-C C-IP67 I-NFC-yokufunda ngasemva kweminwe yeminwe-iBluetooth 5.0-GPS-Uhlobo lwe-C C-IP67
Ngokubonakalayo nakwisikrini ethetha ngeGoogle Pixel 3 kunye 3 XL
Del IPixel 3 XL sibonisa isikrini sayo se-6,5, P-OLED, ngelixa iPixel eqhelekileyo ihlala iphaneli yohlobo lwe-OLED. Iifowuni ezimbini ezibonakala njengezona zibalaseleyo kumgangatho wezikrini, ngelixa ngaphakathi ilele i-chip ye-Snapdragon 845 evela kwiQualcomm ehamba ne-4GB ye-RAM (ayisekho eyimfuneko) kunye nenkumbulo yangaphakathi edlula i-64 ukuya kwi-128GB kuxhomekeke kwimodeli ekhethiweyo. .
Kulo nyaka uGoogle ubeke inotshi enkulu ukuzenza ugqame. Kubetha kakhulu sonke isithuba esele sishiyelwe oko kufanele ukuba kube zizaziso kunye noluhlu lwezinto. Kodwa kukhulu kakhulu ukuba ungade ujonge ukubaxwa. Sicinga ukuba baya kuba nesizathu sokuba benze loo notch inkulu kangako; Asifuni nokucinga ngayo yonke indawo eza kutyiwa kuyo PUBG Uhlobo lodidi lwemidlalo o Fortnite.
Ezinye iinkcukacha kunye namaxabiso abo
Kwaye siyaqhubeka akukho audiojack (Ngonaphakade kubonakala ngathi ukule brand) kunye nezo headphone zohlobo loqhagamshelo lwe-USB-C. Kufuneka kuthiwe iphakheji ibandakanya, ngaphandle kwee-headphone, i-USB-C ukuya kwi-3.5mm dongle, uhlobo lwe-C ukuya kolunye uhlobo lwe-C kunye nolunye uhlobo lwe-C-C kuhlobo lwe-USB-A dongle. Oku kungenxa yengxaki yokuya kwi-USB Type-C nokusuka kwi-audiojack… Iintambo kuyo yonke indawo.
Ukuma kwePixel yenye yezinto ezintsha ezinento yokwenza nayo biza ifowuni yakho kwaye uyilawule ngelizwi lakho njengaye ukuba yayiyihabhu lasekhaya kuGoogle. Ngale ndlela unokuba nePixel 3 yakho kwitafile esecaleni kwebhedi kwaye unxibelelane nayo ngendlela elula.
I-Google Pixel 3 ngoku iyafumaneka ukubekelwa ixabiso le-849 euros yenguqulo ye-64GB, ngelixa i-128GB inyukela kwi-euro ezingama-949. IPixel 3XL inokunyuka iye kwi-euro ezingama-949 kwinguqulelo engama-64GB enenguqulo eyi-128GB enyukela kwi-1.049 euros.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHabemus Google Pixel 3 kunye ne-3XL: iG enkulu iya kuyo yonke into noMncedisi kunye nokufota
Isilayidi sikaGoogle Pixel ngoku sisemthethweni: sikuxelela yonke into!
IHub yasekhaya kuGoogle, okanye uMncedisi kaGoogle ekhayeni lakho ungene kwithebhulethi